Konke Okufuneka Ukwazi NgoBleach
Iimpendulo Zemibuzo Eqhelekileyo NgeMveliso Yemihla ngemihla
UBleach igama eliqhelekileyo isisombululo se-2.5% ye-hypochlorite ye-sodium emanzini. Kwakhona kuthiwa yi-chlorine bleach okanye i-bleach yamanzi. Olunye uhlobo lwe-bleach li-oxygen-based okanye i-peroxide bleach. Ngelixa ungazi ukuba i-bleach isetyenziselwa ukukhubaza i-disinfect and removes stains, kukho enye into yokukwazi malunga nale makhemikhali yansuku zonke ukuyisebenzisa ngokukhuselekileyo nangempumelelo. Nazi ezinye iinkalo ezibalulekileyo malunga nale nkombululo.
Bleach Facts Usetyenziso
I-Bleach ine -shelf yokuphila kunye nomhla wokuphela . Ngokomyinge, isitya se-bleach esingakhuphukiyo silahlekelwa ngu-20% wempumelelo yayo kunyaka ngamnye. Xa ivuliwe, i-bleach iqala ukulahlekelwa ngumlinganiselo omkhulu wamandla ayo emva kweenyanga ezintandathu.
I-chlorine bleach isebenze ngakumbi njenge-disinfectant xa ihlanjululwa kunokuba isetyenziswa ngamandla. Ukuhluthwa ngokucetyiswayo kuku-1 inxalenye ye-bleach kwiindawo ezi-9 zamanzi.
Ipesenti ephezulu ye-bleach iyadingeka ukuba ubuninzi bezinto eziphathekayo (umz., Igazi, iprotheni) likhoyo, njengoko ezi zinto zithatha i-bleach kwaye zithatha ukuzincipha.
Ukuba ukongeza i-sodium hypochlorite bleach ukuze uhlambulule impahla okanye ususe amabala, kungcono ukuyongeza emva kokuba umjikelo wokuhlamba usuzalise ngamanzi kwaye uqale ukuphazamiseka. Ukuba uyongeza i-bleach kunye ne- detergent , ubeka umngcipheko ekunciphiseni ukusebenza kwe-remover stain-based and remover. Ngakolunye uhlangothi, i-bleach esekelwe kwi-oksijini ifaneleke ngakumbi kumanzi atshisayo okanye ashushu ngaphambi kokuba iingubo zongezwe. I-bleaches esekelwe kwi-oksijeni ngokuqhelekileyo ikhuselekile kumbala kwaye iya kugcina ingcwina, kodwa ayiyi kususa umbala. I-hypoclorite ye-sodium ye-bleach yenza iingubo ezimhlophe kodwa ayikhuselekile kuzo zonke izinto.
I-Bleach iphendula ngezinye iikhemikhali eziliqela ukukhupha imiphunga enobuthi. Ngokuqhelekileyo akunakulungiswa ukuxuba i-bleach kunye nabanye abacoca. Ngokukodwa, thintela ukuxuba i-bleach nge- acetone , utywala, iviniga okanye ezinye i-acids, okanye i- ammonia .
I-Bleach inokuthi idibanise isinyithi, ngoko ke xa uhlambulula okanye uhlalutya indawo yensimbi nge-bleach, kubalulekile ukuba uyisule phantsi ngamanzi okanye utywala emva koko.
Nangona ngokuqhelekileyo kukholelwa ukuba ukusela i-bleach kunokukhokelela ekuhlaselweni kwegazi okanye umchamo wokusetyenziswa kweziyobisi, oku akunjalo.
Nangona i-chlorine bleach yintsholongwane enamandla, i-peroxide bleach ayifanelekanga kule njongo. I-chlorine bleach ikhubaza ngenxa yokuba i-oxidizer, inokuphazamisa iiseli ezincinci. Ukuxutywa kwakhona kwindlela i-chlorine bleach isusa ngayo umbala. I-hypochlorite ye-sodium iphula izibophelelo kwi-chromophore okanye inxalenye yemibala ye-molecule, eyinika ingenambala. Ukunciphisa i-bleaches ikhona kwakhona, eguqula izibophelelo zeekhemikhali kunye nokutshintsha indlela i-molecule ikhupha ngayo ukukhanya.
I-chlorine bleach yayisetyenziswa ngokutsha ukutshatyalaliswa kwamanzi ngo-1895 kwiNxweme yaseNewton yaseNew York.
I-bleach yasekhaya ingenziwa ngamanzi, i-caustic soda, ne-chlorine. Inkqubo ye-electrolysis isetyenziselwa ukuvelisa i-chlorine kunye ne-caustic soda ngokusebenzisa umbane wamandla ngokusebenzisa isisombululo setyuwa yetyuwa (i-sodium chloride) emanzini. I-caustic soda kunye ne-chlorine yenzelwa ukuba ibe ne-sodium hypochlorite. Yonke into efunekayo kukubhobhoza igesi ye-chlorine ngokusebenzisa isisombululo se-caustic soda. Ekubeni igesi ye-chlorine inetyhefu, i-bleach ayikho ikhemikhali enye kufuneka iyenze ekhaya.
Nangona iphunga le-chlorine libonakala kwi-bleach, xa i-bleach isetyenzisiwe, ukuphendulwa kweekhemikhali kufana nokuvelisa amanzi anetyuwa kwaye kungekhona igesi ye-chlorine.
Nangona i-chemical dioxin eyaziwayo isaziwayo kwiindawo zokusebenzisa ibhankqalazi esebenzisa imveliso yamapulp kunye nephepha, i-bleach yasekhaya ayikhululekile kwi-dioxin kuba kufuneka i-chlorine yegesi ibe khona kwi-dioxin.
Ngeentsha - IiFilimu zoMqulu malunga neentsha
Yintoni iComposition Composition of Urine?
Yintoni iVedic Math?